Qalabka steel Kaarboonka, birta birta ah ee birta ah
Nooca filter filter tallaabada koowaad
Qaab dhismeedka: rullaluistemadka magnetic
Lambarka Moodalka XYCF
Midabka Laheli Karo Madow, caddaan, casaan, cawl, jaalle.
Xirxirida Kiiska plywood
Codsi Macaamiil aan caadi ahayn
Mashiinkaani waxaa badanaa laga codsadaa qaboojinta dareeraha, jarista nidaamka nadiifinta saliidda ee qalabka wax lagu shiido iyo aaladaha kale ee mashiinka.Waxa uu qaataa boodhka birta yar yar iyo iskuxidhka wasakhda ku jirta dareeraha qaboojinta (saliida) ee durbaanka magnetic ee kala-soocayaasha. gringing wheel, kordhiyo nolosha adeega ee jaraya, soo gaabiyo muddada bedelka ee dareeraha qaboojinta, iyo yaraynta xoojinta wadayaasha iyo wasakheynta deegaanka ee wasakhda.Waa qayb muhiim u ah waxsoosaarka qalabka mashiinka wax lagu shiido iyo qalabka kale ee wax lagu gooyo.
1.zactactact, hawlgal xasilloon, buuq yar, isticmaalka tamarta yar.
Chips-ga si tartiib tartiib ah u sii daa, oo aan culeys badan saarin ..
3.Waa la soo saari karaa iyada oo loo eegayo meel cayiman oo qalabka mashiinka ah.
Waqtiga Nooca shaqada Tilmaamaha amniga / tilmaamida
Saxanka xariijinta 1 toddobaad Nadiifinta Muddada ayaa la dheereyn karaa ama la gaabin karaa, iyadoo ku xiran hadba waxa ka soo baxa dheecaanka
3 bilood Hubi duugista iyo dhaawaca, hagaaji Xaalad duug ah ama dhaawac culus, beddel.
Silsiladda wadista 3 bilood Hubi xiisadda iyo haddii loo baahdo adkee, saliid. Kaliya loogu talagalay nooca silsiladda wadista.
Kunteenarro iyo shirar tuubbo. 6 bilood Hubi cidhiidhi, daxal iyo waxyeelo. Maaddooyinka waxyeellada u leh deegaanka ayaan dhex geli karin duruuf kastoo jirta.
Mashiinka qalabka ---- Eeg buugga tilmaamaha
Qaadista ka-hortagga ---- Dayactir la'aan
Haamaha qaboojiyaha. 500 saacadaha shaqada Hubi faddarayn (kaydka haraaga) oo nadiifi Waxay kuxirantahay habka qalabaynta mudada udhaxeysa ayaa si weyn loo gaabin karaa.
Taangiyada qaboojinta waa qalab gaar ah sidaa darteedna laguma dhejin warshad kasta.
Fiiro gaar ah: Cabbirka kor ku xusan waa sheyga caadiga ah, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Waxaa jira magnet joogto ah (ferrite ama neodymium iron boron, 2 nooc oo ah xoojinta magnetka: 1000GS iyo 3000GS) gudaha durbaanka magnetic. durbaanka magnetic-ka wuxuu wareegayaa mootada. marka dareeraha ay ku jirto wasakhda birta birlabdu u dhow dahay durbaanka magnetic, durbaanka magnetic wuxuu kala sooci karaa wasakhda birta magnetic. Marka wasakhda ay raacdo durbaanka magnetic-ka ee qaybta sare, rullaluistemadka caaggu wuxuu tuujiyaa dareeraha gadaal. Marka durbaanka magnetic-ka uu wasakhda u wado xoqe, xoquhu wuxuu xoqaa wasakhda ku jirta durbaanka magnetka. SEPARATOR magnetic waxaa inta badan loo isticmaalaa daahirinta ee dareeraha qaboojinta (jarida dareeraha ama emulsion) ee mashiinka shiidi iyo qalabka kale ee mashiinka. Si aad u isticmaasho kala soocayaasha magnetka ayaa yareyn kara tirooyinka hagaajinta gawaarida gawaarida, hagaajinta dusha sare ee qalabka shaqada, sii dheereynaya nolosha adeegga gawaarida wax lagu shiido iyo dareeraha qaboojinta, yareynta xoogga shaqaalaha iyo yareynta wasakheynta dareeraha qaboojinta ee deegaanka. SEPARATOR magnetic waxaa loo isticmaali karaa kaligiis, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo miiraha waraaqaha, nadiifiye qashin iyo kala-goys si loo xoojiyo saameynta sifeynta.
Kala-soocida magnetic waxaa loo kala saari karaa waxyaabaha soo socda iyadoo loo eegayo socodka socodka: XYCF-25, XYCF-75, XYCF-100, XYCF-200, XYCF-300, XYCF-400, XYCF-500.
Sida loo doorto:
Guud ahaan marka la hadlayo, si loo doorto nooca ku xiran heerka socodka qulqulka ee looga baahan yahay goobta. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la tixgelinayo xulashada tusaalaha waxaa ka mid ah: socodka socodka, dhererka gelitaanka kala-soocida magnetic iyo booska rakibida goobta. Godka go'an ee kala-soocayaasha magnetku waa 4-9.
Kala-soocayaasha magnetic-ka sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa nooc mashiin lagu dhisay, nus magnet ah durbaanka magnetic-ka iyo durbaanka magnet-ka oo wareegaya, laakiin wareeg uma laha magnet.
Hore: Suunka rarka (suunka birta, silsiladda silsiladda)
Xiga: Qalabka birta birta ah